Iran: Tetikasa Cheetah sy Sabalan Mahafinaritra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jona 2017 19:27 GMT
Misarika ny masontsika amin'ny sary mahafinaritra misy ny tendrombohitra Sabalan ao avaratra-andrefan'i Iran ilay bilaogera malaza mpaka sary Mohammad Darvish. Fomba tsara hanombohana ny herinandro sy manohy mitatitra ny feo manerana izao tontolo izao.
Afaka mahazo vaovao fanampiny momba ity tendrombohitra mahafinaritra ity ao amin'ny wikipedia Sabalan ianao.
Tsy lavitry ny eritreritry ny maro manerantany ny lohahevitra momba ny fiovaovan'ny toetrandro. Androany, mamaky ny hevitr'i Batir Wardam ao Jordania nanoratra tao amin'ny bilaogy Arab Environment Monitor (Mpanaramaso ny Tontolo Iainana Arabo) momba ny lahatsoratra nivoaka tao amin'ny Reuters isika, indrindra indrindra ny fankasitrahana ny ezak'i Ejypta amin'ny fiarovana ny morontsiraka.
Ny farany saingy tsy latsa-danja dia ny lahatsoratra mahaliana sy mahabe fanantenana momba ny Tetikasa Cheetah Iran avy amin'i Sepideh Saremi.